Kutora Yako Saiti Yepasi Pose nekutsvaga | Martech Zone
Kutora Yako Saiti Yepasi Pose nekutsvaga
Chitatu, Nyamavhuvhu 10, 2011 China, Gumiguru 27, 2011 Douglas Karr
Takave nedambudziko uye kunakidzwa kwekushanda pamwe nevatengi vashoma pamazano ekutora yavo saiti yepasi rose kana zvasvika kune SEO. Isu zvakare tine vamwe vatengi vasingade kuverengerwa pasirese asi vanowana toni yemarudzi traffic. Kuwana injini yekutsvaga seGoogle kuti unzwisise chinangwa chako chekushandisirwa nzvimbo kana kudyidzana nedzimwe nyika hakusi nyore sekumisikidza nyika yakanangwa muWebmasters… zvinotora basa rakawanda.
Yakasanganiswa ndeyekunze SEO kubvunza kwatakahaya kuti tishande nemumwe wevatengi vedu uye ivo vakapa zano rakakura ratakakwanisa kushandura kuva mhedzisiro yevatatu vedu vatengi. Yakashatiswa nguva pfupi yadarika yakaita a mharidzo pane kumwe kuongorora kwedata yekutora yako saiti yepasi rose.
International epamusoro nhanho domains shanda zvirinani pane subdomains kana maforodha. Saka, semuenzaniso, kana iwe uchida kuve muItari, tora yako domain neiyo .it tld.
Shanduro yemutauro wemuchina iri hazvishandi. Ingobvunza mumwe wevatengi vangu akashandisa izwi nhengo neshanduro yemuchina yeRussia ... yakawana mashoma uye yakawanda yekukumbira ruregerero.
kuva kero dzemunharaunda (mahofisi ari kure) uye nhamba dzenhare pane ino saiti nzvimbo inoshanda.
kuva zvemuno zvinobuda zvinongedzo pane saiti haina basa.
kuva zvemukati zvinowanda zvinongedzo pane ino saiti haina kukosha kana… hukuru masimba ane inbound zvinongedzo ari nani pane emuno.
View zvakawanda mharidzo kubva Hannah Smith. Iyo data kubva kuongororo yaDistilled ichasunungurwa munguva pfupi.
Tags: Pima CP
Iko Kuvandudza Chikamu Cako Chekushambadzira Budget?
Zvemagariro Midhiya Mapurisa muKushanda